परामर्श! – मझेरी डट कम
‘प्राप्ति ! आज मेरो डक्टरकोमा जानु छ ल!’ बद्रीले अनुनय साथ हेर्दै भन्छन।
‘ओहो! आज त मलाई वर्कसपको तयारी पो गर्नु छ त। बाहिरबाट मानिस आउन थालेका छन। त्यस्को ब्यावस्था गर्नुछ। सक्ने काम त आपै गर्नुस न!‘ प्राप्तिले ऐना हेर्दै सुस्त तर खस्रो आवाज निकाल्छिन्।
बद्रीसँग यस्को प्रतिउत्तर छैन। दिनभर मन्त्रालयमा मथिल्लो तहबाट आउने आदेश अनि वर्षौको अस्वस्थता!-आफ्ना कमी-कमजोरी बाहिरकालाई देखाउनु भन्दा आफ्नै जीवन संगिनीको रुखो शब्दमाला भित्र सुखानुभूतिको प्रयास गर्छन बद्री!
‘सुन न तिमी एक दुई घन्टा पछि गए हुदैन?!’
‘यस्तो जरुरीकाम त समय मै गर्नु पर्यो नि । कहाँ अघि र पछिको कुरो गरिरा?प्राप्तिले अनिवार्यता देखाउछिन’फेरि बिहानै ३-४ जना क्लाइन्ट आइसकेका हुन्छन। सधै लेट हुन्छ। उनीहरुले वेट गर्नु पर्छ सधै। ‘प्राप्तिले चियाको कप उस्को टेवल माथी टक्रक्क बजाउदै राख्छिन।
‘अरु बढी केही चाहियो भने मायासँग माग्नु ल! मलाई हतार हुन आट्यो। उनीहरुले पर्खिरहेका होलान। ‘ टेक्नोलोजीको विकासले कहाको मान्छे लाई कहा पुर्याइदिन्छ । हुन पनि प्राप्तिआज भोलि अनलाई परामर्श सुबिधा उपलभ्ध गराउन थालेकि छिन ।
‘अनि माथिल्लो ड्रयरमा छन सबै हस्पिटलको डकुमेन्टहरु, बिर्सेर गएर मलाई फोन नगर्नुहोला मलाई फुर्सद हुदैन पुर्याउन फेरि। ‘लौन भुसुक्क बिर्सिएछु !! हेर्नुस त आज छोरीको स्कूलमा प्रोग्राम छ रे जसरी भएनि जानुहोला। १० बजे पुग्नु पर्छ। ‘ प्राप्तिले स्याण्डलको लेस मिलाउदै बद्रीलाई थुप्रै कुरोको संझना गराउछिन।
‘के आयो फेरि’ सेलफोनमा छोटो रिङ सुनेर प्राप्तिले बद्री तिर हेरेर सुस्तरी भन्छिन। नजिकै सोफामा बसेर चिया पिउदै गरेको बद्रीको आँखा जानि नजानी प्रप्तिको सेलफोनको टेक्स्टमा ठोकिन्छन। , ‘come online sweet heart , i am missing you.’
लिनै आटेको चियाको सर्को रोकिन्छ बद्री स्तब्ध हुन्छन। श्रीमतीको उपस्थितिले मात्रै पनि हजार खुशीको कल्पना गर्न सक्ने उन्को अस्वस्थ शरिर अनि प्राप्तिको अनलाईन परामर्शको शब्दबाणहरु र सेलफोनको टेक्स्ट म्यासेज माथिङगलमा समुद्रि लहर जस्तै सुस्त अनि बिस्तारै छिटो छिटो तरंगिन थाल्छन।
3 thoughts on “परामर्श!”
अतिथि November 4, 2011 at 2:22 am
आफ्नै जीवन संगिनीको रुखो शब्दमाला भित्र सुखानुभूतिको प्रयास ……….
आश्मा November 6, 2011 at 6:53 pm
धन्यवाद अतिथि — यो उत्साह
धन्यवाद अतिथि — यो उत्साह बर्धक वाक्यांश को लागी र अर्को पटक हिम्मतका साथ सही परिचय लिएर आउनु होला 🙂 🙂
neupaneru November 7, 2011 at 8:53 am
ramro cha! i am atithi, whom i commented you above..